कसरी एक सुन्दर मान्छे पठाउन: ढिलो होस् वा चाँडो, धेरै महिला समस्या सामना गर्दै हुनुहुन्छ? सजिलै - र प्रमुख शब्द यहाँ कच्चा र आदिम मानिस पठाउने किनभने "सुन्दर" छ। तर यो किन? सबै एक सभ्य तरिका हल गर्न सकिन्छ, र सम्बन्ध को बिच्छेद सहित। तर, यो सांस्कृतिक मानिस पठाउन कहिलेकाहीं आवश्यक छ, कोसँग सम्बन्ध उहाँले थिएन, तर उहाँले धेरै उत्सुक तिनीहरूलाई थियो। यस लेखमा - कसरी ठीक मान्छे पठाउन मा एक व्यावहारिक गाइड।
त्यसैले, जस्तै सम्बन्ध, यदि एक मान्छे थियो, तर उहाँले निरन्तर यसको सहानुभूति र थप घनिष्ठ सम्बन्ध जान राम्रो हुनेछ भन्ने आशय प्रकट, यो सम्बन्ध निम्न तरिकाहरू मध्ये एक हुन सक्दैन व्याख्या गर्न सही छ।
निम्न वाक्यांश बारेमा बताउन व्यक्तिमा: "तपाईं एक धेरै हुनुहुन्छ राम्रो मानिस, के तपाईं पक्का अर्को केटी कदर हुनेछ। तपाईँ - मेरो मान्छे "।। यो विधि उपयुक्त छ भने सामान्य मा व्यक्ति, बौद्धिक व्यवहार, तर आफ्नो attentions तपाईं समस्या बुझ्न छैन।
जवान सही वाक्यांश बुझ्न गर्छ भने र एकदम पर्याप्त व्यवहार गर्दैन, त्यसपछि तपाईं एकदम "रोचक" तरिकामा लागू गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यस्तो।
आफ्नो कल प्रतिक्रिया छैन, र त भेटघाट गर्न आउँछन्, रात को तेस्रो घण्टामा फिर्ता कल, वा दुई घण्टा लेट पनि आउन, र उहाँले चुन्नु के को विषय मा एक घोटाले यस्तो खराब ठाँउ भेट्न जहाँ तपाईं सकिनँ प्राप्त।
तपाईं पनि स्पष्ट वरदान कि सज्जन आवश्यक सक्नुहुन्छ उठयो सक्दैन, उदाहरणका लागि, मीठो सानो yahtochku!
तपाईं अझै पनि आफ्नो पाहुनाहरूलाई कष्टप्रद सज्जन आमन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, र सबै भन्दा जवान व्यक्तिले तिर आफ्नो मनोवृत्ति छ व्याख्या गर्ने प्रयास गर्ने प्रेमिकाहरुलाई, एक गुच्छा पछि छोडेर टाढा जाने।
ठूलो स्वरमा आफ्नो नाक र coughing उड्ने, क्याफे मा तालिका बसिरहेको, उदाहरणका लागि: Admirer गर्न व्यवहार लागि लाजमर्दो थियो। तर तपाईं आफ्नो प्रतिष्ठा लागि डर छैन भने मात्र।
उहाँलाई तिनीहरूलाई कल गर्न संग, एसएमएस पठाउन, तिमी पनि एक अप्रिय Cavalier संग परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ: तपाईं कथित सम्बन्ध कायम गर्ने प्रशंसक ढेर उपस्थिति देखाउन हरेक सम्भव तरिकामा "तपाईं हामी एक फूलदान म धेरै चाहनुहुन्छ, वा के म यसलाई धेरै चाहनुहुन्छ हुनुपर्छ लाग्छ - धेरै - साँच्चै? र पीट लेख्न के? "।
मिति, तपाईंले एक हजुरआमा संग आउन सक्नुहुन्छ।
रूपमा सुन्दर मान्छे पठाउन तपाईं आफैलाई संग छलफल एक नाइट गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि नै साथ व्यवहार मा यो "परिषद" को फल लागू गर्न थाल्छन्।
यहाँ कसरी एउटा सुन्दर मान्छे पठाउन हो! साँचो, शब्द "सुन्दर" उद्धृत गर्नुपर्छ! सायद, तीमध्ये केही काम गर्नेछ, र सज्जन तपाईं एक्लै छोड्न हुनेछ।
सम्बन्ध त्यहाँ पहिले देखि नै छ, तर तिनीहरूले एक तपाईंलाई बोझ हो, र तिनीहरूले भङ्ग हुनुपर्छ जब कठिन। यहाँ, को पाठ्यक्रम, हामी diplomatically कार्य र पहिलो मामला मा भन्दा पतली पर्छ। आफैलाई लागि निर्णय गर्न महत्त्वपूर्ण छ - तपाईं कुनै सम्बन्ध कायम गर्न जारी गर्न एक पटक र सबै को लागि छोड्न चाहनुहुन्छ वा तपाईं राम्रो मैत्री सम्बन्ध राख्न प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ कि। त्यहाँ थप कुराकानी गर्ने इच्छा छ भने, अलग mitigate र सांस्कृतिक पठाउनुहोस् मानिस सकेसम्म धेरै प्रयास गर्नु पर्छ। त्यहाँ खातामा लगिनेछ सुन्दर मान्छे पठाउनु अघि गर्नुपर्छ भन्ने केही nuances छन्।
1) पूर्व-आवश्यक शब्दहरू पूर्वाभ्यास गर्नु लागि, बाहिर बाट भने उनलाई सुन्न।
2) यो निर्णायक कुराकानी लागि सही ठाउँ चयन गर्न आवश्यक छ। यो सबै भन्दा राम्रो एक "तटस्थ" को क्षेत्र मा गरेको छ। उदाहरणका लागि, एक क्याफे मा (तर त्यो जो रोमान्टिक क्षणमा सम्बन्धित छ), वा पार्क मा। घरमा वा सक्दैन, साथै काममा आफ्नो घरमा कुराकानी सञ्चालन गर्न।
3) एकदमै निष्पक्ष हुन भन्नुभयो। यो तपाईं हामीलाई भन्नुहोस् तपाईं यसलाई सन्तुष्ट छैनन् कि सबै, तर यो सही हो, र कुरा तपाईं यसलाई लायक छैनन् हो भनेर भन्न छ मतलब छैन। तपाईं, उदाहरणका लागि, आफ्नो सम्बन्ध ", आगो" पुरानो अब छ या तपाईं एक जवान व्यक्ति जो उहाँले योग्य भावना र मनोवृत्ति, र कठिनाइ कि दिन सक्दैन भनेर भन्न सकिन्छ।
जवान अझै पनि लाग्छ र बन्द सम्बन्ध तोड्न छैन, र यसको बारे categorically, उहाँलाई reassuring केही जस्तै, त्यसपछि हामी ठ्याक्कै Cavalier इच्छा निरुत्साहित छ जो वाक्यांश, सम्बन्ध जारी राख्न भन्न सक्नुहुन्छ गर्न चाहनुहुन्छ गर्दैन लाग्छ भेटी छ भने, "म अझै पनि म भनेर बुझे त्यसपछि, पूर्व-प्रेमी जस्तै। " यो, को पाठ्यक्रम, अप्रिय, तर प्रभावकारी।
उहाँले तपाईं दिनुभयो पछि कसरी मानिस फर्कन
सबैभन्दा परिष्कृत तरिका: बदला पूर्व मानिसको रूपमा
यी सम्बन्ध समस्या लाग्छ भन्दा बढी सामान्य
HITON Patritsiya - अमेरिकी अभिनेत्री
Merlin Monro: दिग्गज अभिनेत्री को जीवनी
वंशानुगत रोग - सिस्टिक फाइब्रोसिस: लक्षण र रोग को manifestations
दबाइ "warfarin": बयान